Latest VOA News!
72. ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်မှာ ခရိုအေးရှားကို အနိုင်ယူပြီး ပြင်သစ်ဗိုလ်စွဲ	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(04h ago)
71. ဖားကန့်မြေစာပုံပြိုမှု သေဆုံးသူ ၁၅ဦးထိ တိုးလာ	-VOA
#မြန်မာ	(07h ago)
70. စစ်သည်ရုပ်အလောင်းပြန်သယ်ရေး မြောက်ကိုရီယားနဲ့ကန် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ တွေ့ဆုံ	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(07h ago)
ဖွင့်ရန်။ ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်း ကျန်ရစ်တဲ့ အမေရိကန်စစ်သည်ရုပ်အလောင်းတွေ နေရပ်ပြန်ယူရေးအစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ တွေ့ဆုံပါတယ်။
69. ကျူးဘားဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး စတင်ခြေလှမ်း	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ကျူးဘားနိုင်ငံမှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေအဖြစ် နိုင်ငံရေးနဲ့ အခြားအပြောင်းအလဲတွေ စတင်လုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။
68. အီးယူနဲ့ညှိဖို့အစား တရားစွဲဖို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ကန်သမ္မတအကြံပေးခဲ့	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(08h ago)
ဖွင့်ရန်။ ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ် Thereas May အနေနဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂကနေ ဗြိတိန် နုတ်ထွက်ရေး မဟာဗျူဟာ တစိတ်တပိုင်း အရ EU နဲ့ ညှိနှိုင်းနေမယ့် အစား ဥပဒေကြောင်းအရ တောင်းဆိုဖို့ အမေရိကန် သမ္မတ Donald Trump က အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
67. Wimbledon အမျိုးသမီးတင်းနစ် Serena Williams ကို Angelique Kerber အနိုင်ရဗိုလ်စွဲ	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(21h ago)
ဖွင့်ရန်။ စနေနေ့ကယှဉ်ပြိုင်ကစားတဲ့ ဝင်မ်ဘယ်လ်ဒန် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးတဦးချင်း ဗိုလ်လုပွဲမှာ အဆင့် ၁၁ ရှိတဲ့ ဂျာမန် တင်းနစ်မယ် Angelique Kerber က Grand Slam ချန်ပီယံဖလား ၂၃ ကြိမ် ရထားဖူးသူ အမေရိကန်တင်းနစ်မယ် Serena Williams ကို ၆-၃၊ ၆-၃ နဲ့ နှစ်ပွဲဆက် အနိုင်ရသွားပါတယ်။
66. အမေရိကန်ဦးဆောင် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အနီးက တရုတ်သူလျှိုသင်္ဘော	-VOA
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဟာဝိုင်အီပြည်နယ်နားမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရေပိုင်နက် ထဲ နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံပါ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအနားမှာ တရုတ်သူလျှို သင်္ဘော တစင်း ရောက်ရှိနေတာကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့် နေကြောင်း အမေရိကန်ရေတပ်က ပြောပါတယ်။
65. Wimbledon အမျိုးသမီးတင်းနစ် Sarina Williams ကို Angelique Kerber အနိုင်ရဗိုလ်စွဲ	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(22h ago)
ဖွင့်ရန်။ စနေနေ့ကယှဉ်ပြိုင်ကစားတဲ့ ဝင်မ်ဘယ်လ်ဒန် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးတဦးချင်း ဗိုလ်လုပွဲမှာ အဆင့် ၁၁ ရှိတဲ့ ဂျာမန် တင်းနစ် မယ် Angelique Kerber က Grand Slam ချန်ပီယံဖလား ၂၃ ကြိမ် ရထားဖူးသူ အမေရိကန်တင်းနစ်မယ် Serena Williams ကို ၆-၃၊ ၆-၃ နဲ့ နှစ်ပွဲဆက် အနိုင်ရသွားပါတယ်။
64. ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုမယ့် ၂ သင်းလုံး ယုံကြည်မှုအပြည့်	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(23h ago)
ဖွင့်ရန်။ ဒီကနေ့ည ကစားမယ့် ဒီနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်လုပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် တက်လာတဲ့ ခရိုအေးရှား အသင်းနဲ့ တတိယအကြိမ် မြောက် ဗိုလ်လုပွဲတက် လာတဲ့ ပြင်သစ်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့် ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
63. ကမ္ဘာ့ဖလား ကြက်တူရွေးဗေဒင်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဒီနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲမှာ ဘယ်သူ ဗိုလ်စွဲမလဲ၊ပြင်သစ်၊ ပဲရစ်စ်မြို့ တိရစ္ဆာန်ရုံက ကြက်တူရွေးနဲ့ တာဂျီကစ္စတန် နိုင်ငံ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲက ကုလားအုတ်တို့ရဲ့ ဗဒင်ခန့်မှန်းချက် ကတော့ ပြင်သစ် အနိုင်ရမယ်လို့ ဟောကိန်းတူနေပါတယ်။
62. ကမ္ဘာ့ဖလား ဘယ်လ်ဂျီယမ် တတိယဆုရ	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ တတိယနေရာအတွက် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နဲ့ အင်္ဂလန်တို့ ဒီကနေ့ ၈ နာရီခွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားတာမှာ ပထမပိုင်း ၃ မိနစ်ကျော်မှာပဲ ဘယ်လ်ဂျီယံက ပထမဂိုးရပြီး ၈၁ မိနစ်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယမ်ကပဲ နောက်ထပ် တဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ တတိယ နေရာ ရသွားပါတယ်။
61. ကန်ရွေးကောက်ပွဲ ရုရှားဝင်ရှုပ်မရှုပ် ထရမ့် မေးမည်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ ရုရှားတွေ အနေနဲ့ ၀င်ရောက် နှောင့်ယှက် ခဲ့လေသလားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုရှားသမ္မတ Vladimir Putin ကို မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သောကြာနေ့ကပြောပါတယ်။
60. ညီလာခံမှာ ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးမှု ရလာဒ်ကောင်း မျှော်လင့်	-VOA
#မြန်မာ	(1d ago)
ဖွင့်ရန်။ ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံတခုလုံး ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေ အစုအဖွဲ့အလိုက် ခေါင်းစဉ်အသီးသီးကနေ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အတွက် သဘောတူညီမှုတွေရှိသလို ဆက်လက်ညှိနှိုင်းရဦးမယ့်အခြေအနေတွေရှိပေမဲ့လို့ အဖြေရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်လာနိုင်ဖို့တော့ မျှော်လင့်တယ်လို့ ညီလာခံကို တက်ရောက်နေတဲ့ ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူအနေနဲ့ တက်ရောက်နေသူက ပြောပါတယ်။
59. မိုင်းကိုင်တိုက်ပွဲ စဲသွားပေမယ့် စစ်ရှောင် ၁,၀၀၀ မပြန်ရဲသေး	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကျင်းပနေစဉ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်ခရိုင် မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ဘက်မှာ တပ်မတော်က ထိုးစစ်ရပ်ဆိုင်း၊ တပ်ရုပ်သွားပြီးဆိုပေမဲ့ စစ်ဘေး ရှောင်တွေကတော့ နေရပ်ကို မပြန်ရဲ ကြသေးပါဘူး။
58. ဖားကန့်မြေစာပုံပြို လူ ၁၀ ဦးမက သေဆုံး	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်တဲ့လုပ်ကွက်တခုမှာ မြေပြိုကျတဲ့ အတွက် အဲ့ဒီ့မှာ ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေနေသူ တော်တော်များများ သေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့ကြ ပါတယ်။
57. ညီလာခံတက် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် နေပြည်တော်က ပြန်လည်ထွက်ခွါ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးကို လာရောက်တဲ့ မြောက်ပိုင်း မဟာ မိတ်အဖွဲ့ ၇ ဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်ကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
56. ကန်-တရုတ် အခွန်တင်းကြပ်မှု ကန် စိုက်-မွေးသမားတွေနစ်နာ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်နဲ့တရုတ်၂ နိုင်ငံအကြား အပြန်အလှန်အခွန်တင်းကြပ်နေကြတာကြောင့် အမေရိကန် တောင်သူ လယ်သမားတွေ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပြီး ဒီကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲက သူတို့ရဲ့စီးပွါးရေးတွေကို စပြီး ထိခိုက်နေပြီလို့ခံစားနေကြရပါပြီ။
55. ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲအကြို အသေခံဗုံးခွဲ ၁၃၀ ခန့်သေဆုံး	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ပါကစ္စတန် အနောက်တောင်ပိုင်းက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လူထုအခန်းအနားတရပ်မှာ အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒေသန္တရ ပါလီမာန် ဘာလူချီစတန်-အဝါမီပါတီရဲ့ အမတ်လောင်းတဦး အပါဝင် အနည်းဆုံး (၁၂၈) ဦးသေဆုံးပြီး (၁၂၀) ကျော် ဒဏ်ရာရရှိ သွားပါတယ်။
54. ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Sharif နဲ့ သမီး ပါကစ္စတန် မှာအဖမ်းခံ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Nawaz Sharif နဲ့ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမွေခံ သမီးဖြစ်သူ Maryam တို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေ ပါကစ္စတန် အရှေ့ပိုင်း Lahore မြို့ကိုပြန်လာတဲ့လေယာဉ် သောကြာနေ့မှာ ဆိုက်ဆိုက်ချင်းမှာပဲ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။
53. ရွေးကောက်ပွဲဝင်စွက်မှု ရုရှား ၁၂ ဦးကို ကန် တရားစွဲမည်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့ ကွန်ပြူတာ စနစ် ထဲကို ခိုးဝင်ဖို့ လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုနဲ့ ရုရှား စစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ၁၂ ယောက်ကို တရားစွဲဆိုဖို့ အမေရိကန် ဖက်ဒရယ် Grand Jury အဖွဲ့တဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
52. သမ္မတ Trump နဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ၂ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ဟာ ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ် Theresa May နဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အရှေ့ အလယ်ပိုင်းကိစ္စ အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေအပြင် ဗြိတိန်မှာရှိနေတဲ့ ရုရှား သူလျှိုဟောင်းတွေကို ရုရှားအစိုးရက အဆိပ်ခတ်တဲ့ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
51. ဂူထဲပိတ်မိရာက လွတ်မြောက်လာသူ ထိုင်းဘောလုံးအသင်းဝင်တွေ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်း	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ချင်းရိုင်မြို့က သဘာဝကျောက်လိုဏ်ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ လူငယ် ဘောလုံး သမား လေးတွေဟာ သူတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ကြသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဘယ်လို အန္တရာယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်၊ အသက်ရှင်အောင် သူတို့ ဘယ်လို နေခဲ့ကြတယ် ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖလှယ်ကြပါတယ်။ Wild Boars - တောဝက်လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဘောလုံးအသင်းက အဲဒီ လူငယ် ၁၂ ဦးကို ရောဂါကူးစက် ပြန့်ပွားခြင်းမရှိအောင် သီးသန့်ဆောင်မှာ ခွဲထားပြီး သူတို့တွေဟာ အနည်းကယ် မနာမကျန်းဖြစ်တာကလွဲလို့ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လျှက်ရှိကြောင်း ဆေးရုံ တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီကနေ့ ပြောပတါယ်။ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့က သူတို့တွေ လိုဏ်ဂူထဲကို စ၀င်သွားစဉ်က တနာရီလောက်သာ ကြာဖို့ မျှော်လင့်ထား ခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မိုးသည်းပြီး ဂူထဲကို ရေတွေဝင်လာတာကြောင့် အထဲမှာ ပိတ်မိသွားခဲ့ကြတာလို့ ကလေးတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရတဲ့ မိဘတချို့က ထိုင်း မီဒီယာတွေကို ပြောပါတယ်။ သူတို့တွေက ကျောက်ကြောတွေ ကြားက ကျလာတဲ့ရေတွေကို သောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရေငုပ်သမား အတော်များများကို ဆေးကုသမှု ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းဟာ ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး ခက်ခဲကြောင်း ထိုင်းရေတပ် အထူးတပ်ဖွဲ့အကြီးကလည်း ပြောပါတယ်။
50. ငါးမြစ်ချင်းပို့ကုန် ဆော်ဒီဆိုင်းငံ့မှုကြောင့် မြန်မာ့ငါးလုပ်ငန်း အထိနာ	-VOA
#မြန်မာ	(2d ago)
ဖွင့်ရန်။ နှစ်စဉ် သန်း ၄၀ လောက် ဝင်ငွေရနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကငါးတင်ပို့မှုကို ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက ဒီနှစ် ဆန်းက စပြီး ရပ်ဆိုင်း ထားတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ရိုက်ခတ်လာနေကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောပါတယ်။
49. မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် အဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရ မကြာခန တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ နေပြည်တော်က ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ တရုတ် မြန်မာနယ်စပ်က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ (၇) ဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော် မရှင် တာဝန်ရှိသူတွေ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြပြီး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေအတွက် မကြာခန ဆက်လက်တွေ့ဆုံသွားဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
48. မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မယ့် သတင်းထွက်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်သေးတဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် အဖွဲ့ ၀င်တွေဟာ ရှမ်းပြည် နယ်ဘက်မှာ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြောင်း တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (RCSS) ဘက်က ပြောပါတယ်။
47. Trump နဲ့ Putin ရန်သူ-မိတ်ဆွေမဟုတ် ပြိုင်ဘက်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ရုရှားသမ္မတ Vladimir Putin ဟာ မိတ်ဆွေမဟုတ်သလို ရန်သူလည်း မဟုတ်ဖူးလို့ အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က သူတို့ ၂ ဦး Finland နိုင်ငံ Helsinki မှာ တွေ့ဆုံဖို့ ရက်ပိုင်းအလိုမှာပဲ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
46. ကမ္ဘာ့ဖလား ပရိသတ် အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ ရုရှားဟင်းလျာများ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ရုရှားနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲကို လာကြည့်ကြတဲ့ တကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေဟာ ဆိတ်စွပ်ပြုတ်၊ ကာဗီယာငါးဥ နဲ့ နွားပေါက်စရဲ့ လျှာ စတဲ့ ရုရှားဟင်းလျာတွေကို အကြိုက်တွေ့နေကြပါတယ်။
45. Kim Jung Un မှ Donald Trump သို့ ပေးစာ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ဆီကနေ “သိပ်ကောင်းတဲ့” စာတစောင် သူ လက်ခံရရှိတယ်လို့ သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ဒ် ထရမ့်ပ်ကပြောပါတယ်။ အဲဒီစာထဲမှာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေဖို့နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ စင်္ကာပူထိပ်သီး အစည်းအဝေးမှာ သူတို့နှစ်ဦး ပူးတွဲလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သမ္မတထရမ့်ပ်ရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်တွေကို ချီးကျူးပြောဆိုထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
44. NATO စစ်စရိတ်တိုးမြှင့်လေ ကန်လက်နက်ရောင်းကောင်းလေ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက ကာကွယ်ရေး အသုံးစားရိတ်ကို သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မှီအောင်သုံးဖို့ သံဓိဌာန်သစ် ချမှတ်လိုက်တာဟာ အမေရိကန် လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် အကြီးအကျယ်အကျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းကို နှစ်စဉ်အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလျံနဲ့ချီပြီး လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
43. ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေး ကုလကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ရခိုင်သွားမည်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေကို အဆုံးမှာ မူရင်းနေရာတွေကိုပြန်ပို့ရေး ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ငန်း စတင်ရေး ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တဖွဲ့ကိုစေလွှတ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြင်ဆင်နေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ UNDP ရဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကဲက ကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါတယ်။
42. ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု အကြောင်းရင်းများ ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်	-VOA
#မြန်မာ	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၃% ကျော်ဟာ သူတို့ရဲ့ ဇာတိမြေမှာ မနေကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေ အဲဒီလို ရွေ့ပြောင်း နေထိုင်ခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေပါသလဲ၊ လူတွေ တနေရာကနေ တနေရာ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်စေတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းရင်းက ဘာတွေပါလဲ။
41. ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများ မိုးတွင်းကာလဘေးကင်းရေး ပြင်ဆင်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံ ကောဇ့်ဘဇားက သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ခိုလှုံရာ စခန်းတွေမှာ ရေကြီး မြေပြိုပြီး လူတွေ ဒုက္ခရောက်မယ့် အရေးကို လျော့ပါးသက်သာအောင် ကုလသမဂ္ဂဘက်က ကျွမ်းကျင်သူတွေ ငှားယမ်းပြီး ကြိုတင် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ လူပေါင်း ၂ သိန်းလောက်က ပြိုကျလွယ်တဲ့ မြေပေါ်မှာ နေထိုင်နေကြရပြီး ဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
40. နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးစစ် ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းမရှိသေးဟု တရုတ်ပြောဆို	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ သွင်းကုန်ခွန် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုတွေကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ အရှိန်မြင့်လာနေတဲ့အပေါ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ အမေရိကန်နဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေတာ မရှိတဲ့အကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံက ဒီကနေ့ပဲ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
39. ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းသစ် မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အဆိုပြုဆွေးနွေး	-VOA
ဖွင့်ရန်။ နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်က မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ ၇ဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ နှစ်သုတ်ခွဲပြီး တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ပထမအစုအဖွဲ့နဲ့ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို လမ်းကြောင်းသစ်တခုနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အဓိကဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIOက ဒုဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော်က ပြောပါတယ်။
38. ရုရှားရေနံ အပေါ် အားကိုးမှု ဂျာမနီကို Trump ဝေဖန်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥရောပ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေထဲက အကြီးဆုံးနဲ့ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဂျာမဏီဟာ ရုရှားရဲ့ အချုပ်အနှောင်ကို ခံနေတယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး အမေရိကန် သမ္မတ Donald Trump က ဂျာမဏီ တနိုင်ငံထဲကို ကွက်ပြီး NATO စစ်မဟာမိတ်တွေရဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အစည်းအဝေးမှာ အပစ်တင် ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
37. ဒေါ်လာဘီလျံ ၂၀၀ ဖိုး တရုတ်ကုန်စည်တွေအပေါ် အခွန် ၁၀% Trump ချမှတ်မှု တရုပ် တုန်လှုပ်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ တရုတ်ကုန်ပစ္စည်း နောက်ထပ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၂၀၀ ဖိုးအပေါ် အခွန် ၁၀ % ကောက်ခံဖို့အတွက် Trump အစိုးရအဖွဲ့က ပြင်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာအတွက် အံ့သြတုန်လှုပ်ရကြောင်း တရုတ်အစိုးရက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
36. အရည်အချင်းရှိ ချင်းဒုက္ခသည် လူငယ်သေဆုံးမှု Kansas City မြို့ခံတွေ ၀မ်းနည်း	-VOA
ဖွင့်ရန်။ လူငယ်ချစ်ကြည်ရေးသံတမန်တွေအဖြစ် ဒီနှစ်အတွက် ကျမတို့က (၆)ဦးကို ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ပန်းပင်တွေ စိုက်ကြတယ်။ ရေလောင်းကြတယ်။ ပေါင်းမြက်တွေ နုတ်ကြတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ လမ်းတွေကို သာယာလှပအောင် လုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်။
35. ၂၁ ပင်လုံ တတိယညီလာခံ တပ်ချုပ်မိန့်ခွန်းအပေါ် ပြည်ပတိုင်းရင်းသားတချို့အမြင်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး (၂၁)ရာစုပင်လုံ တတိယအကြိမ် ညီလာခံဖွင့်ပွဲနေ့က တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြောကြားသွားတဲ့ အချက်တွေကိုကြည့်ရင် အပစ်ရပ်ငြိမ်းချမ်ရေး အလားအလာဟာ ပိုပြီး ဝေးကွာသွားစေမယ့် သဘောရှိကြောင်း ပြည်ပအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားအရေး လှုပ်ရှားသူတချို့က သုံးသပ်လိုက်ကြပါတယ်။
34. ဂူတွင်းပိတ်မိခဲ့သူလူငယ် ၁၃ ဦး ကယ်တင်နိုင်ရေး နိုင်ငံတကာကူညီမှု ထိုင်းအစိုးရ ချီးကျူး	-VOA
ဖွင့်ရန်။ လှိုင်ဂူထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ၁၃ ယောက်ရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့ ဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်နဲ့ တကမ္ဘာလုံးက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ အားလုံးကို အသက်ရှင်လျှက် ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီး ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ နောက်ချန်မထားသင့်ဘူး ဆိုတာပါ။
33. အင်္ဂလန်ကို အနိုင်ယူပြီး ခရိုအေးရှား ဗိုလ်လုပွဲတက်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ခရိုအေးရှားအသင်းဟာ ဆီမီးဖိုင်နယ်လ်မှာ အင်္ဂလန်အသင်းကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲ တက်သွားပါပြီ။
32. လှိုဏ်ဂူမှ လွတ်မြောက်လာသူ ထိုင်းလူငယ်အားလုံး ကျန်းမာရေးပုံမှန်ရှိ	-VOA
#မြန်မာ	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံက လှိုဏ်ဂူထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့ရာက ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ လူငယ်ဘောလုံးအသင်းဝင်တွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျနေပေမဲ့ ယေဘုယျ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်နေကြောင်း အစိုးရတာဝန်ရှိသူတယောက်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
31. ကုလမှတ်ပုံတင်မှာ “ရိုဟင်ဂျာ” အမည်တပ်ပေးဖို့ ဒုက္ခသည်တွေတောင်းဆို	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ သိန်းချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကို UN ကဒ်တွေ စ-လုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့ မြန်မာပြည်မှ ရိုဟင်ဂျာများ ဆိုတဲ့ အချက်အလက် ကဒ်ထဲထည့်သွင်းပေးဖို့ UNHCR ကို ထပ်မံ တောင်းဆိုထားတယ်လို့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။
30. အမေရိကန်အရေးယူမှု မြန်မာသံအမတ်ကြီးနဲ့မေးမြန်းချက်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့ကို ဌာနေပြန်ပို့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ မြန်မာ အစိုးရရဲ့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနတို့က ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကနေ ၀န်ကြီး အဆင့်ထိ အရာရှိကြီးတွေ၊ နောက် သူတို့ မိသားစုဝင်တွေကို အမေရိကန် ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင် ဒဏ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။
29. “ခွဲမထွက်ရေးမူ” ကိစ္စ ကြေလည်အောင်ညှိဖို့ အတိုင်ပင်ခံတိုက်တွန်း	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဒီကနေ စတင်ကျင်းပတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ တတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာတော့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအကြား ညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတဲ့ “ ခွဲမထွက်ရေးမူ” နဲ့ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ရပ်တည်ချက်တွေကို အဖွင့်မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
28. မြန်မာအလုပ်သမားတွေအပေါ် အလုပ်ရှင်တရားစွဲမှု ထိုင်းတရားရုံးပယ်ချ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအပေါ် သူတို့ တိုင်ကြားစွပ်စွဲခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီက အသရေဖျက်မှုနဲ့ ပြန်တရားစွဲခဲ့တာကို ဘန်ကောက်မြို. တရားခုံရုံးတစ်ခုက အပြစ်မရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
27. ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးအမှု ကုလ လူ့အခွင့်အရေးမှူးတွေ စိုးရိမ်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်တွေလို့ သတင်းယူရင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ Reuters သတင်းဌာနက မြန်မာသတင်းသမား ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို တရားစွဲဆိုဖို့ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။
26. မြန်မာဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခုအပေါ် ကန် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ပိတ်ပင်မှုချမှတ်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ မြန်မာနဲ့ လာအိုနိုင်ငံမှာ ဗီဇာကန့်သတ်မှုတွေကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လာ ၉ ရက်နေ့ကစလို့ ချမှတ်ဖို့ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးအရာရှိတွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အမိန့်ပေးထားပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံခြင်းစီလိုက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံသား အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၃(ဃ) အရ ဗီဇာကန့်သတ်ခံထားရတဲ့ လျှောက်ထားသူတွေရဲ့ အမျိုးအစားတွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အဆုံးဖြတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
25. Bangladesh နိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် ရခိုင်ပြည်နယ်သွားမည်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်ဒုက္ခသည်တွေ လုံခြုံစိတ်ချစွာနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖိအားတွေတိုးလာနေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး AH Mahmood Ali မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာခင်မှာအလည်အပတ်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ဒီကနေ့ထုတ် The Independent သတင်းမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
24. သမ္မတ Trump တင်းမာမှုကြား NATO နဲ့ EU အခြေစိုက် Brussels ရောက်	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(4d ago)
ဖွင့်ရန်။ NATO လို့ခေါ်တဲ့ မြောက်အတ္တလန်တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နဲ့ရော EU ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်သွား ဖို့အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ ၇ရက်ကြာခရီးစဉ်စတင်နေပါပြီ။ အခုတော့နေတိုးဌာနချုပ်ရှိရာ ဘလ်ဂျီယန်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ သမ္မတထရမ့်ရောက်နေပါတယ်။
23. ၂၁ ပင်လုံညီလာခံ တတိယစည်းဝေးပွဲအပေါ် ပြည်ပတိုင်းရင်းသားတွေအမြင်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ စတင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါ အစည်းအဝေးရဲ့ ထူးခြားချက်က NCA အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေရော လက်မှတ်ထိုးမထားတဲ့ အဖွဲ့တွေကိုပါ တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားထားတာ ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်၊ နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေ အပါအဝင် နယ်ပယ်စုံက ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
22. ကမ္ဘာ့ဖလား ပြင်သစ် အနိုင်ရ ဆီးမီးဖိုင်နယ်ပွဲ သုံးသပ်ချက်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ မနေ့ညကရုရှားနိုင်ငံ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးအကြိုဗိုလ်လုပွဲမှာ ပြင်သစ်က Belgium ကို ၁ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရပြီး နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကိုတက်သွားခဲ့ပါပြီ။ နှစ်သင်းစလုံးအကြိတ်အနယ်ကစားခဲ့ကြပေမဲ့ ရတဲ့ အခွင့်အရေးကို အမိအရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်အသင်းက အနိုင်ရသွားခဲ့တာပါ။
21. ကိုရဲလွင် (မဇ္ဇျိမလှိုင်း) ကွယ်လွန်	-VOA
#မြန်မာ	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ တေးရေး၊တေးဆို၊ဘေ့စ်ဂီတာအနုပညာရှင် ဦးရဲလွင်(မဇ္ဇျိမလှိုင်း)ဟာ ဒီကနေ့ အသဲရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလို တိုင်းပြည်အတွက် အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို ဂီတပညာနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရခြင်းဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဘဲလို့ သူနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ခံစားနေကြရပါတယ်။
20. ကန် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် အဆိုပြုခံရသူ အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံ	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(5d ago)
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန် တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး အဖြစ် သမ္မတ Donald Trump က အဆိုပြုထားတဲ့ Brett Kavanaugh က ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့မှာတော့ အထက်လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ စတင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေပါတယ်။
19. ထိုင်းလူငယ်တွေကယ်ထုတ်မှု မြန်မာတွေအမြင်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းလှိုဏ်ဂူတွင်းပိတ်မိနေတဲ့ ဘောလုံးအသင်းကျောင်းသားလေးတွေနဲ့ နည်းပြကို ကယ်ထုတ်နေတာမှာတော့ မနေ့ကအထိ ကျောင်းသားလေး၈ဦးအထိ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ အခုနောက်ဆုံးကျန်နေသေးတဲ့ ငါးဦးကို ဆက်လက်ကယ်ထုတ်နေကြပြီဖြစ်ပြီး အခုအသံလွှင့်ချိန်မှာတော့ အားလုံးကို ကယ်ထုတ်လာနိုင်ပြီလို့ သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
18. တတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ စတင်မယ့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်များများစားစားရစရာမရှိနိုင်ကြောင်း ဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီတကြိမ်ညီလာခံဟာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှ ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသက်ဆက်ပေးတဲ့အနေအထားတခု ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။
17. ပိတ်မိနေတဲ့ ထိုင်းလူငယ်အားလုံး ဂူပြင်ရောက်ပြီ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း လှိုဏ်ဂူထဲ ပိတ်မိနေတဲ့ ထိုင်းကျောင်းသား ၁၂ ဦးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘောလုံးနည်းပြ တဦး အားလုံး စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးလုံးကို ကယ်ထုတ်လာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ထိုင်ရေတပ်က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
16. နိုင်ငံတော် တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးသစ် အဖြစ် Brett Kavanaugh ကို သမ္မတ Trump အမည်တင်သွင်း	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဇူလိုင်လကုန်မှာ အနားယူတော့မယ့် အမေရိကန် တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး Anthony Kennedy ရဲ့နေရာမှာ အစားထိုး ခန့်အပ်ဖို့ တရားသူကြီး Brett Kavanaugh ကို အမည်တင်သွင်းဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အကြောင်း သမ္မတ Donald Trump က တနင်္လာနေ့ ည ၉ နာရီက သမ္မတ အိမ်ဖြူမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
15. ကမ္ဘာ့ဖလား ဆီးမီး ဖိုင်နယ် Belgium နဲ့ ပြင်သစ် ပွဲ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးအကြိုဗိုလ်လုပွဲရဲ့ ပထမပွဲစဉ်ကို ဒီကနေ့စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြင်သစ်နဲ့ Belgium အသင်းတို့ ကစား ကြမှာပါ။
14. ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ် အဖြစ် Jeremy Hunt ကို ခန့်အပ်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ အီးယူဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေ နုတ်ထွက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း သဘောထားကွဲလွဲ မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Boris Johnson ရာထူးကနေမနေ့တုန်းကပဲ နုတ်ထွက်သွားတယ်လို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ရုံးရဲ့ပြောဆိုချက်အရ သိရပါတယ်။
13. ဂူတွင်းပိတ်မိလက်ကျန်လူငယ် ၅ ဦး ကယ်ဆယ်ရေး ဆက်လက် ကြိုးပမ်း	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မယ်ဆိုင်မြို့က ဇွန်လ ၂၃ရက်နေ့ကတည်း လှိုဏ်ဂူအတွင်း ပိတ်မိနေတဲ့ ကျောင်းသားလေး ၁၂ ဦးနဲ့ ဘော်လုံးနည်းပြ တဦးပေါင်း ၁၃ ဦး ကို ဇူလိုင်လ၈ ရက်နေ့မှာ ၄ဦး၊ ဇူလိုင် လ၉ရက်နေ့ မှာ ၄ ဦး စုစုပေါင်း ၈ ဦး ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
12. Cox's Bazar ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၄၂၀၀ ကုလ စီစစ်ကဒ် စတင်ထုတ်ပေး	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ ခိုလှုံနေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အထောက်အထား ကပ်ပြားထုတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR အကူအညီနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ကစပြီး လုပ်ဆောင်နေရာမှာ အခုဆိုရင် စိစစ်ဖို့ လာရောက်တဲ့ ဒုက္ခသည်က ၄၂၀၀ လောက်ရှိသွားပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။
11. ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့လျှောက်ထားချက် ပြည်နယ်တရားရုံးပယ်ချ	-VOA
#မြန်မာ	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ကချင်ခေါင်းဆောင်သုံးဦးကို စစ်တပ်ကို အကြည်ညိုပျက်စေတယ်ဆိုတဲ့ အသရေဖျက်မှုပုဒ်မနဲ့ တပ်က တရားစွဲဆိုထားတာကို ချေဖျက်ပေးဖို့ လျှောက်ထားချက်ကို ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်က လက်မခံပဲ တရားသူကြီးက ဒီကနေ့ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
10. ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နုတ်ထွက်	-VOA
#နိုင်ငံတကာ	(6d ago)
ဖွင့်ရန်။ ဗြိတိသျှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Boris Johnson ဟာ မကြာသေးခင် အချိန်ပိုင်းအတွင်းကဘဲ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ကြီး Johnson ဘာကြောင့် အခုလို ရာထူးက ရုတ်တရက် နုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေတော့ ထွက်မလာသေးပါဘူး။
9. ရိုက်တာသတင်းထောက်တွေကို တရားရုံးစွဲချက်တင်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ နုိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့ စွတ်စွဲချက်နဲ့ ရိုက်တာသတင်းသမားနှစ်ဦးကို စွဲချက်တင်ဖို့ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေ နည်းပါးတာကြောင့်၊ ရိုက်တာသတင်းသမားနှစ်ဦးအမှုမှာ ပြန်လည်ခုခံဖို့ အားနည်းနေတယ်လို့ သတင်းသမားတွေရဲ့ ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။
8. ရိုက်တာသတင်းထောက်အမှု ကန်နဲ့ အီးယူ သဘောထားထုတ်ပြန်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ရိုက်တာသတင်းထောက် ၂ ဦးကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုနဲ့ စွဲချက်တင်ဖို့ တရားရုံးက ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ် များစွာ စိတ်ပျက်မိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
7. ဂျပန် မိုးသည်းမြေပြိုမှု လူတရာထက်မနည်း သေဆုံး	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဂျပန် နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ သုံးရက်ဆက်တိုက် မိုးသည်းထန်ခဲ့ပြီးနောက် မြေပြိုမှုတွေအတွင်း အနည်းဆုံး လူ ၁၀၀ သေဆုံးရကြောင်း အာဏာပိုင်တို့က ပြောပါတယ်။
6. ဂူတွင်းပိတ်မိ ထိုင်းလူငယ် ရှစ်ဦးမြောက် ကယ်တင်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက ကျောက်ဂူထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေထဲက ရှစ်ဦးမြောက်ကို မကြာခင် အချိန်ပိုင်းကပဲ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဂူပြင်ကို ကယ်ထုတ်ရေးစတင်တဲ့ ဒုတိယနေ့မှာပဲ နောက်ထပ် လေးဦး ဂူပြင်ကို ကယ်ထုတ်လိုက်နိုင်တာပါ။
5. ဂူတွင်းကျန်သေးသူတွေ ကယ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဒုတိယအဆင့် မကြာခင်စတင်ဖို့ မျှော်လင့်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံက ဂူထဲမှာ ကျန်နေသေးတဲ့ ကျောင်းသားငယ် (၈)ယောက်နဲ့ သူတို့ဘောလုံးအသင်းနည်းပြတို့ကို ကယ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဒုတိယအဆင့်ကို မကြာခင် ပြန်စတင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့က ကယ်ထုတ်ထားပြီဖြစ်တဲ့ ကလေး(၄)ဦးကတော့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူ နေကြပါတယ်။
4. အဆိပ်သင့် ဗြိတိသျှအမျိုးသမီး သေဆုံး	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လက အဆိပ်သင့်ပြီး ရုရှားသူလျှိုဟောင်းတဦး နာဖျားမကျန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလားတူ အာရုံကျောထိ ဓာတုအဆိပ်သင့်သူ အမျိုးသမီးတဦး သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် ဗြိတိသျှရဲတပ်ဖွဲ့က လူသေမှုဖွင့်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။
3. ဗီယက်နမ်ကို အတုယူဖို့ မြောက်ကိုရီးယားကို Pompeo တိုက်တွန်း	-VOA
ဖွင့်ရန်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဆက်ဆံရေးသစ် တည်ဆောက်တာမှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို အတုယူဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo က မြောက်ကိုရီးယားကို တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နဲ့ အမေရိကန်တို့ကြား စစ်ပွဲ အဆုံးသတ် သွားပြီးတဲ့နောက် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက လုပ်လာတာမျိုးကို အတုယူဖို့ တိုက်တွန်းတာပါ။
2. ဂျပန် ရေကြီး မြေပြိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၈၀ ထက်မနည်းရှိပြီ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ သုံးရက်ဆက်တိုက် အပြင်းအထန်မိုးရွာပြီး မြေပြိုကျတာတွေကြောင့် လူ ၈၀ ထက်မနည်း သေဆုံးရပြီးတဲ့နောက် ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေ တနင်္ဂနွေနှောင်းပိုင်းက ဆက်ပြီးရှာနေကြပါတယ်။
1. ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်အပြီး ဟေတီ ဓာတ်ဆီဈေး မူလအတိုင်း ပြန်သတ်မှတ်	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ဟေတီနိုင်ငံမှာ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကို ၄၉% တိုးမြှင့်လိုက်တာကြောင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပြီး စနေနေ့က လူသုံးယောက် သေဆုံးရပြီးတဲ့နောက် ဈေးနှုန်းတိုးမြှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကို သမ္မတ Jovenel Moise က ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။